Herizo Razafimahaleo : Tsara fa tara - Dinika forum.serasera.org
Herizo Razafimahaleo : Tsara fa tara
Fitohizan'ny hafatra : Herizo Razafimahaleo : Tsara fa tara
hery - 25/01/2006 10:57
Tsy alahelon-toerana fa fitsikerana ny zava-tsy mety ankehitriny no nataon'ny olo-maventy Herizo Razafimahaleo omaly tamin'ny mpanao gezety, ka ilay fanjakana madiva hifarana raha tonga fifidianana no notsikafoniny nandritra ny ora maro.
Tsy milaza ny lahatsoratra hoe diso ny famakafakana nataony, saingy olana efa voatanisan'ny maro hatramin'izay ireo nambara omaly ireo. Ny fandrobana fahefana nandritra ny tolona 2002 ireny, ny fampiasana volam-panjakana tao anatin'ny tolona, ary teo ireo fanagadrana isan-karazany ny mpitondra teo aloha sy ny tsy fisian'ny filaminana politika.
Ireo no nahatonga ny mpiray donak'afo hitambatra ho iray ka zary mpanohitra tsy fidiny amin'izao fotoana, ary na ilay lohany eo amin'ny fanjakana aza anie dia nanambara, ny taona 2003, fa ilaina ny fifamelan-keloka tao anaty tranon'Andriamanitra tamin'izany fotoana voalaza etsy ambony izany.
Efa-taona izao no nanjakan'ity fitondrana ity, izay ve vao mahatsapa ireo tsy fetezan-javatra ireo ingahy Herizo Razafimahaleo ? Na ny zaza vao miana-mandeha aza anie dia efa nahatsikaritra ny mety ho avy rahampitso momba ny fiainam-pirenena tamin'izao fanjakan-dRavalomanana izao, saingy raha vao miteny dia ireny naiditra am-ponja ireny.
Tsara fa tara ny fanehoan-kevitra nataony, satria ny rehetra izao efa any amin'ny kandidà no ao an-tsaina, kanefa ny hafa mbola variana mitanisa ny raharaha 2002 izay efa hain'ny maro hatramin'ny kely sy bitika ny tantarany.
Tsara ny fanehoan-kevitra saingy tsy nisy mafy toy ny nataon-dry Faharo sy ry Voninahitsy tetsy amin'ny Antenimieram-pirenena anie amin'ny fanatsikafonana ny tsy fahombiazana ataon'ity fanjakana ity e. Sa kosa namela malalaka ny mpitondra hiasa ity olona fanta-daza eto amin'ny firenena ity, ka ny vanim-potoana tahaka izao no ahafahana manaposaka ny rafitra tsy nety hatrizay ?
Inona no vaha olana entin'ingahy Herizo hanarina ireo lesoka rehetra voalazany omaly ireo, satria ny filatsahan-kofidiana hataony aza mbola tsy hay ? Soa aloha fa mahay mitsikera ny hafa fa tsy variana mitango lalitra fotsiny na dia hita fa latsaka an-katerena aza ny firenena.
tana - 25/01/2006 11:41
Za ndray mahita fa tsara le izy ary tsy tara e:
-Tsy tara satria raha niaraka tam'reo opposition mahery fihetsika ireo izy dia ho voadaka v. teny am13mei koa, ary hita fa hafa le style satria hita hoe voadinika ny hevitra fa tsy botolo toy ny an'ny sasany;
-Ny hoe lazaina efa teo no niala koa tsy marina satria ireo mpitondra ankoatra ny pdt ra8 anie efa tao koa e, fa tsy nalaza fotsiny; ary Herizo raha tao taloha dia Izy (sy ny minisitra Leader) mihitsy no nametra-pialana noho ny fahitan'ny tsy mety nataon'ny mpitondra. Ary tamin'ity ary dia efa nilaza am-pahibemaso izy fa efa n-consulter-na raha hiditra ao am'ty fitondrana ity fa izy ny nandà noho ilay "aventurisme politique" hodiavin-dRa8;
-Tsy tara e, mety ho tonga am-le hoe aleo hiasa koa anie le fitondrana e.
-Za zao mahita fa mety ho izy irery no candidat (raha hanao izy) ankoatran-dRa8(ho an-ze mbola tsy mahatsapa mangirifiry) mety hahita vato fa raha ny ankoatra izay de tsy poins (Pr zafy, Dté Lahiniriako, Mr R. Ratsiraka...)
"Raha misy miraika am'io dia mba mitady le version complèten-le conférence de presse iny aho raha misy mahita"
Fiffi - 25/01/2006 15:45
tana: manana an'io aho fa @ fomba ahoana no hanomezako anao an'io ?
fijo - 25/01/2006 20:22
tiako le fomba fanoherany,satria fanoherana misy fisainana,sy manome vahaolana.saingy iretsy biby be tia ady iretsy ve,dia hanohana azy?????ny an'ireny mantsy raha vao tsy misy gidraka dia tsy manohitra izay.
jentilisa - 27/01/2006 09:06
fa ny zavatra mba nahavariana ahy dia hoe fony vao nanaomboka nitondra hoe Ravalo dia nantsoiy izy fa tsy nanaiky. Satria ve izany fanonganam-panjakana ilay natao? Nahona kosa izy no tsy maba nitaky ny mangarahara tamin'ny valim-pifidianana tamin'izany fotoana izany?
Ragadona - 27/01/2006 10:06
Tsy mora kosa aloha ny hamaritra ny hoe "mangarahara" tamin ireny e. Maro ny zavatra nifamahofaho tamin ireny, na tany amin ny tariky ny Amiraly zay nipoiran ny olana, na teo amin ny mpomba an dRa8 zay tsy vitsy ny nialoka tamin ny foto pisainana hoe "zay mahery no basy" ka nahavita fihetsika hafahafa.Zava pitranga amin ny firenena mandalo krizy voktry ny olam pifidianna rhtr zany. Amin ny maha mpanao politika an Herizo dia azo antoka fa namakafaka an io izy.
fijo - 27/01/2006 22:18
sady sarotra be raha tamin'ireny ianao no hitaky zavtra be.ny antony,dia mbola tena tao anaty fo mafana ny olona.
Fiffi - 02/02/2006 07:25
fijo: ka samy te ahazo seza sy ny anjarany daholo .
fijo - 03/02/2006 20:57
izay le tsy metyko.lasa mitohoka ao daholo